Isemina kwiPowerCivil Latin America -Geofumadas
Ikhaya/Ukufundisa i-CAD / GIS/I-Seminar kwi-PowerCivil yaseLatin America
Ukufundisa i-CAD / GISZobunjineliMicrostation-BentleyTopography
I-Seminar kwi-PowerCivil yaseLatin America
Iinjineli Edmundo Herrera iza kuqhuba isemina kwi ukusebenza ukuba unalo imveliso Bentley aguqulelwe Latin America, livele njengoko PowerCivl Latin America, njengoko wenza eSpain.
Umhla: UJulio 15 we-2009
Shedyuli: 10: 00 am (Mexico) 12: 00 pm (Argentina)
Isikhathi: Ixesha le-1 i-30 imizuzu
Mcebisi: Ing. Edmundo Herrera
IPowerCivil iyafana nento eyenziweyo ngePowerMap, kodwa ngokulungiswa kweGeopak Engeneering Suit kunye neenkqubo ezisetyenziswa kakhulu kubuNjineli boLuntu, ngakumbi kwindawo yeeNdlela, nangona ukusetyenziswa kwayo kwemisebenzi kunye nolwakhiwo kuluncedo kwiZikhululo zeenqwelo moya, Ukugcina iindonga , Hydroelectric, Mines, Platforms, Bridges and Port Engineering.
IPowerCivil ithatha ithuba lokunyaniseka kwabasebenzisi beBentley, ngakumbi ngenxa yokucinga komsebenzi kwiiphaneli ezibonisa igrafu yokulandelelana ehambisa iinkqubo eziphambili kuyilo kunye nolawulo lwemisebenzi yeziseko zophuhliso, ngaphandle kwesantya sokusebenza KwiMicrostation ngaphandle kwamathandabuzo, kusenziwa imisebenzi ngedatha enkulu ngaphandle kokubingelela ngezixhobo, abakwaziyo ukuzigcina xa besuka kwiinguqulelo ze-V8.5 (kwiClipper) ukuya kwiXM kunye neV8i. Nazi izibonelelo eziphambili ezibhengezwa nguBentley ngokubhekisele kwiPowerCivil:
IPowerCivil kuphela kwesoftware eyenziweyo kwaye inemigangatho yayo yeLatin America, ezinye zeempawu ezahlulahlulayo zezi:
Udibanisa iindawo ezininzi ukuvelisa i-volumetry nge-strata.
Ukuvelisa i-sub-surfaces kwiifayile zokuvota.
Ukwenza ngokuzenzekelayo izicwangciso kwisityalo, isityalo / iprofile, iprofayili kunye neenyawo zezicwangciso ngokuzenzekelayo ezizaliswe ngokulandelelana kwedatha yeprojekthi.
Yenza uguquko oluyinkimbinkimbi phakathi kwezinto ezahlukeneyo zokugcina izixhobo zodonga.
Yenza ngokuzenzekelayo ukugcina izindonga ngokukhawuleza njengoko ziyimfuneko.
Iingxelo ezivelisiweyo zineenkcukacha ze-stratigraphy, kungekhona nje ukusika okulula kunye nokuzalisa.
Naluphi na utshintsho lobunzima kumacandelo ePower Civil Latin yaseMelika yiparameter.
Izichasiselo zeexes zilula, zibamkele kwaye zenziwe ngemizuzwana
I-Power Civil Latin America inenkqubo yokulinganisa izinto ngokusekwe kwiikhowudi zokuhlawula ukwenza iingxelo zidityaniswe kwifayile eguqukayo ukufumana ukubalwa kweendleko zomsebenzi.
Usebenza Ayikho enye, isebenza ngokupheleleyo kunye data wokwenene elikhulu kwimizuzwana (Ubunxantathu kumphezulu 300 megabytes ifayile ngaphantsi kwe komzuzu 1).
Utshintsho kwiprojekthi lwenziwe ngexesha langempela kwaye ngokufanelekileyo.
I-bathymetry enkulu kunazo zonke emhlabeni, iPanama Canal, isebenzisa njengomgangatho ovela kwi-1993.
Inkxaso yezobuchwepheshe ngeSpanish.
Uhlobo oluhle kakhulu lomsebenzisi Iimpawu ezinzima kakhulu zenziwe ngendlela ehlelekile kwaye elula.
Imiqulu eyenziwe kwimizuzwana.
kumphezulu imiphezulu azenziwanga zoonxantathu, umfuziselo lowo triangulated ngakumbi yenziwa iimpawu ezikrelekrele ukuba ingabonakaliswa kunye nezivelayo iinkangeleko ukuphelisa eziliqela iimpazamo ekwakhiweni.
Apha ungabhalisa, kwaye apha ungakwazi ukufunda kabanzi malunga ne-PowerCivil
Funda ikhulu leminyaka yokulondeka kwiiyure ze-12
I-Silken Hotels, i-luxury nobuntu
I-2011: Yintoni enokuyilindela: Ii-Platforms ze-CAD